Any Torkia, mpitarika fivavahana manatevin-daharana ny antso hisian’ny sivana amin’ny tambajotra sosialy · Global Voices teny Malagasy
Efa nanenjehana mpitsikera ny soatoavina Islamika ny fehezan-dalàna famaizana Tiorka
Voadika ny 19 Septambra 2021 13:44 GMT
Vakio amin'ny teny Italiano, English, বাংলা, Español, polski, English
“Sainan'i Torkia” avy amin'i Jeremy Vandel, nampiasana lisansa CC BY-NC-ND 2.0
Eo ambany fandrahonana ny fahalalahana nomerika any Torkia taorian'ny nilazan'i Ali Erbas, lehiben'ny Mpitantana ny Raharaha Fivavahana any Torkia fa tokony hofehezina ny fampiasan'ny olom-pirenena ny tambajotra sosialy mba hifanaraka amin'ny soatoavina Islamika. Taorian'ny nanakianan'ny antoko mpanohitra ao Torkia sy ny fikambanan'ny mpisolovava ny mpitondra fanjakana tamin'ny fampifangaroana ny fivavahana sy ny lalàna dia nandrehitra ny afo i Erbas tamin'ny fanomezana sosokevitra ho an'ny filoha Recep Tayyip Erdoğan mba hanamafy ny fifehezan'ny governemanta ny tambajotra sosialy – hetsika iray mifanaraka amin'ny fijoron'i Erdoğan ara-politika teo aloha.
Nizara ny fanamarihany izy nandritra ny lanonana am-bavaka nanamarihana ny fanombohan'ny taom-pitsarana tamin'ny 1 Septambra. Nanjakazaka tamin'ny andiam-baovao ny anarany nanomboka teo.
Tsy vaovao tao amin'ny tambajotra sosialy ny fomba fisainan'i Erbas. Tany am-piandohan'ity taona ity, namoaka boky mitondra ny lohateny hoe, “Etikan'ny tambajotra sosialy” (“Sosyal Medya Ahlakı“) ny Mpitantana ny Raharaha Fivavahana. Nanoratra toy izao ny mpitondra fivavahana ao amin'ny sasin-tenin'ny boky:
Zava-dehibe ny manangana fanairana matanjaka, sy ny rafitra ara-dalàna izay mamaritra ny zoro ara-dalàna ampiasana ny tambajotra sosialy. Indrindra indrindra, ilaina ny mamorona rafitra fifehezan-tena avy amin'ny fahafantarana fa manara-maso antsika Andriamanitra na aiza na aiza, ary amin'ny fotoana rehetra.
Indraindray, hoy hatrany i Erbas tao amin'ny sasin-teniny, mety tsy ho ampy hifehezana ny tambajotra sosialy ny lalàna, noho izany dia nanolo-kevitra ny mpitondra fivavahana hampiasa ny “fiqh” na ny didy fakantahaka Islamika. “Mahomby ny fiqh, izay sady mametraka andraikitra roa eo amin'izao tontolo izao sy any amin'ny tontolo hafa amin'ny fitondran-tena asehon'ny olona, ary manana tanjona amin'ny fisarihana ny feon'ny fieritreretany,” hoy i Erbas nanoratra.
Naverin'ny mpitondra fivavahana ny filàna lalàna mifantoka amin'ny fivavahana tamin'ny fivoriana an-tserasera tamin'ny 5 Septambra.
Ny tambajotra sosialy, izay manenika ny tontolo virtoaly sy nomerika ary misy fiantraikany amin'ny tena fiainana, dia mety hiteraka fialana amin'ireo fitsipi-pitondran-tena, ny soatoavina ary toetra tsara izay kendren'ny fivavahana amin'ny ambaratongan'ny olona sy ny fiarahamonina. Noho izany dia ilaina ny mamorona rafitra ara-dalàna izay hamaritana ny zoro iasana ara-dalàna momba ny fampiasana ny tambajotra sosialy sy ny fananganana fahatsiarovan-tena matanjaka hanoherana ny fahasimban'ny soatoavina.
Manahy ny manam-pahaizana fa mety hahatonga ny governemanta hampiasa ny andininy faha 216 amin'ny fehezan-dalàna famaizana Tiorka hanenjehana ireo mpitsikera ny soatoavina Islamika ny antso ataon'ny mpitondra fivavahana hanaraha-maso ny sehatry ny media sosialy. Ny andininy faha 216 dia manameloka “ny fanaovana tsinontsinona am-pahibemaso ny soatoavim-pinoana amin'ny ampahany amin'ny vahoaka” ary efa be mpampiasa any Tiorkia. Tamin'ny antsafa nifanaovana tamin'ny PEN International, niresaka ny fomba nikendrena azy noho ilay lalàna sy ny fomba fanitsakitsahan'izany ny fahalalahana ara-pivavahana ao amin'ny fanjakana ilay mpanoratra Sevan Nişanyan:
Notsikeraina ity andininy ity noho ny fanomezany fiarovana isankarazany ho an'ny fivavahana na finoana samihafa ary noho ny fampiharana azy amin'ny fomba manavakavaka, indrindra amin'ny tsy ortodoksa, tsy ara-pivavahana na manohitra ny finoana ara-pivavahana. Nisongadina ireo ahiahy ireo tamin'ny raharahan'ilay mpitendry piano malaza sady mpamoron-kira Fazil Say, sy ny mpanao gazety Ceyda Karan sy Hikmet Cetinkaya.
Tamin'ny volana Jolay tamin'ny herintaona, nandany lalàna mametra ny tambajotra sosialy i Torkia (lalàna mifehy ny famoahana lahatsoratra amin'ny aterineto sy ny fanasaziana ny heloka bevava avy amin'izany famoahana izany) izay misy andiana fitakiana hisy akony maharitra amin'ny zo nomerika sy ny fahalalahana maneho hevitra any Torkia.
Herintaona taty aoriana, naneho ny fikasany ny Antoko Rariny sy Fampandrosoana eo amin'ny fitondrana (AKP) hamoaka lalàna hifehezana kokoa hiadiana amin'ilay nofaritan'i Erdoğan ho “lainga fampihorohoroana”, izay ilazana ireo vaovao sandoka zaraina tamin'ny sehatry ny tambajotra sosialy. Mamaritra ny fanapariahana ny “fandisoam-baovao” ho toy ny heloka bevava ny volavolan-dalàna, ary raha hita fa meloka dia mety higadra dimy taona an-tranomaizina ilay nahavanon-doza noho ny fizarana vaovao tsy marina tamin'ny sehatry ny tambajotra sosialy.
Nilaza i Yaman Akdeniz, mpampianatra ambony Tiorka malaza sady manam-pahaizana momba ny zo anjotra niresaka tamin'ny Gazete Duvar fotoana fohy taorian'ny nanambaran'ny AKP ny volavolan-dalàna vaovao fa hametra bebe kokoa ny fahalalahan'ny fampitam-baovao ao amin'ny firenena izay efa nahatratra ambaratongam-pameperana tsy mbola nisy hatrizay ny fampitam-baovao ilay volavolan-dalàna hoavy. “Inoana ny fitsipika hoavy fa mety hiteraka fahasimbana kokoa ho an'ny fahalalahan'ny fampahalalam-baovao amin'ny taona 2022,” hoy i Akdeniz.
Mahazo fanohanana avy amin'ny filoha sy ny mpikambana ao amin'ny antoko eo amin'ny fitondrana i Erbas, ary tsy mbola fantatra raha hanaiky ny sosokeviny vao haingana ny antoko eo amin'ny fitondrana na tsia.